Vaovao - Inona ny firafitry ny resina fifanakalozana anion
Inona ny firafitry ny resina fifanakalozana anion
Ny resin'ny fifanakalozana Anion sy cation dia manana rafitra mitombina. Niniana natao tambajotra, rafitra telo-habe. Misy polymère mifanaraka amin'izany, izay mety asidra na hady. Amin'ny alàlan'ny fanatanterahana polymerization mifanaraka amin'izany ihany no ahafahana mamorona ity vokatra somary tsara ity. Ny vidin'ny tahiry amin'ny vokatra toy izany dia somary marin-toerana. Raha ampitahaina amin'ny vokatra hafa mitovy karazana aminy dia manana tombony lehibe izany.
Rehefa mampiasa resina fifanakalozana anion sy cation dia tokony hitandrina amin'ny fepetra sasany isika, indrindra amin'ny indostria manokana sasany. Raha tsy izany dia mora ny manana olana. Raha somary ambany ny diplaoma dia mety hisy fiantraikany amin'ny vokatray izany. Raha tena matotra izy io, dia hanimba ny tombotsoan'ny tenantsika sy ny ankilany, Amin'izany fomba izany, tena mampidi-doza ny fankanesantsika any amin'ny ozinina sy ho an'ny fampandrosoana sy ny fandrosoantsika amin'ny ho avy.
Ny firafitry ny resin'ny fifanakalozana anion sy cation dia tsy hiova manoloana ny asidra na ny fizahana sasany. Na ny ranoka miscellaneous aza dia tsy hanimba vokatra toy izany, ary na dia ny tontolon'ny oksidana ankapobeny aza dia tsy hisy akony akory. Noho izany, ny vokatra toy izany dia be mpampiasa amin'ny indostria, Azo ampiasaina amin'ny indostrian'ny simika tsara izy io, miaraka amin'izay, afaka misoroka ny fanafihana hafanana koa izy io, ary tsy hanana olana manoloana ny maripana mafana be.
Ka inona ny karazana fepetra ilaina amin'ny fiasan'ny resa fifanakalozana cation? Ho an'ny fanontaniana toy izany, ny mpampitaha sasany dia nanome valiny mifanaraka amin'izany, manantena fa ny olona sasany izay tsy mahatakatra an'io lafiny io dia afaka mahazo fahatakarana sy fahatakarana tsara kokoa. Raha miasa dia tokony hihaino ny rano sy ny diplaoma izy ireo ary hiaro azy ireo amin'ny faritra mety. Ankoatr'izay, rehefa manasa lamba sy mando amin'ny lamosina izy ireo dia tokony hihaino tsara ny fahasamihafana mifanaraka amin'izany.